राष्ट्रपतिज्यू, गणतन्त्रलाई यति विलासी नबनाइदिनुस् :: सरगम भट्टराई :: Setopati
सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपतिज्यू!
सामाजिक सञ्जाल रङ्गिएको छ: राष्ट्रपति भवन शीतल निवासबाट १८ करोडको गाडी माग भयो। मलाई थाहा छ, तपाईंले १८ करोडको गाडी माग्नुभएको होइन। अठार करोड त के अठार लाखको सवारी पनि तपाईं माग्नुहुन्न। किनकि, तपाईंले माग्नै पर्दैन। जनता शासित गणतान्त्रिक देशको माहोल नै यस्तै छ: पद र कद हुनेले माग्नै पर्दैन। सोझै ज्यू, हजुर गर्दै हाजिर हुन्छ।
यसबीच आसन फेरिएको तपाईंको मात्रै हो। जनताको दैनिकी उस्तै छ। अभाव र दरिद्रको रंग उस्तै छ। जिन्दगीले अभाव र गरिबीको उही कथा रटाइरहेछ। नवदुलहीहरूले उस्तै पतिवियोगको नियति झेलिरहेछन्। सन्तान टाढिएका वयोवृद्ध, अभिभावक विदेशिएका लालाबालाको अनुहारमा उस्तै आँशु बगिरहेछन्। लाउँ-लाउँ, खाउँ-खाउँ उमेरका युवायुवती हजारौं माइल टाढा छुट्टाछुट्टै सिरानी च्यापेर जवानी धकेल्न अभिशप्त छन्। सरकारले जनतालाई रोग, भोक, शोकबाहेक केही दिन नसकेको तपाईंलाई राम्रैसँग थाहा छ।
यसो भन्नुको तात्पर्य तपाईंका पति मदन भण्डारीझैं ‘साइकल नै डोर्याउनुस्’ होइन। तपाईंको माग, गरिब जनताका अपेक्षा र देशको सामर्थ्यबीच तादात्म्य मिलेन कि भन्ने अभिप्राय मात्रै हो।
शिर आलोचित भएका बेला शरीर कन्याएर कति छारो उडाउनू!
अचेल सानातिना घटनामा पनि सामाजिक सञ्जालमा नामै तोकेर गाली गर्नेहरूको ठूलो जमात छ। ताली पाइने आशमा गाली गर्नेहरू पनि सडकमा नभेटिने होइनन्। तर, लहलहैमा लागेर आलोचना खन्याएको नबुझ्नूहोला, महामहिमज्यू!
हिजोआज कति अनमेल जीवनशैली छ मान्छेहरूको! कति पीडा छ मान्छेहरूमा! शान्ति सुरक्षाको अवस्था कति भयावह बन्दै छ?
तपाईं जनताकी छोरी, राजा-महाराजा झैं ठाँटबाँठ कहाँ सुहाउँछ र! सत्ते सत्ते, कत्ति पनि प्रिय देखिएको छैन। जनताको शासनको उपेक्षा त छ नै। तै पनि तपाईंलाई ‘महारानी’ बन्ने सोख पलाएको छैन भनेर म किन विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन?
फेसबुकमा 'मेमोरी' मात्र हेर्यो भने पनि पोहोरका चुनावी भाषण 'रिप्ले' भइरहेका छन्। दुईतिहाइको सरकारले दुई–तीन सिन्को पनि भाँचेको छैन। रिबन काटेरै पाँचवर्षे आयु रित्याउने छाँट देखिरहेको छु।
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर ५, २०७५, १८:४०:००